Ndizakhile njani izigidi eziDola zeShishini leB2B ngeVidiyo ye-LinkedIn | Martech Zone
Ndayakha Njani iidola ezizigidi zeShishini leB2B ngeVidiyo ye-LinkedIn
Ividiyo iyifumene ngokuqinileyo indawo yayo njengenye yezona zixhobo zibalulekileyo zentengiso, nge I-85% yamashishini ukusebenzisa ividiyo ukufezekisa iinjongo zabo zokuthengisa. Ukuba sijonga ukuthengisa kwe-B2B, I-87% yabathengisi bevidiyo ndichaze i-LinkedIn njengejelo elisebenzayo lokuphucula amazinga okuguqula.
Ukuba oosomashishini be-B2B abalisebenzisi eli thuba, baphoswa kakhulu. Ngokwakha iqhinga lokuthengisa igama lomntu elijolise kwividiyo ye-LinkedIn, ndakwazi ukukhulisa ishishini lam ngaphezulu kwesigidi seedola ngaphandle kwenkxaso-mali.
Ukwenza ividiyo esebenzayo ye-LinkedIn kuhamba ngaphaya komgangatho ukuthengisa iingcebiso ngevidiyo. Iividiyo ze-LinkedIn kufuneka zenziwe kwaye zilungiselelwe ngokukodwa iqonga ukuze zifikelele kubaphulaphuli abalungileyo kwaye zenze ifuthe lokwenyani.
Nantsi into endiyifundileyo (kwaye ndinqwenela ukuba ndiyazi) malunga nokusebenzisa ividiyo ye-LinkedIn ukwakha inkampani ye-B2B.
Ndizimisele ukukhupha Umdlalo wam wevidiyo we-LinkedIn malunga neminyaka emibini edlulileyo. Ndandinengxaki yokwenza iividiyo zezithuba zenkampani, kodwa uphawu lomntu lwalulutsha kum. Bendihlala ndicinga ukwenza iividiyo ze-LinkedIn ezifunekayo zimile ngokuma okufanelekileyo phambi kwebhodi emhlophe kwaye ndikhuphe (kubhalwe ngokucacileyo) ulwazi lokuthengisa ngaphakathi. Nditshintshe icebo lam ndaza ndaqala ukwenza iividiyo ezingaqhelekanga ngokuthetha nje ngamacandelo eshishini endilaziyo nendilithandayo.
Endaweni yokugxila ekuthengiseni ishishini lam, ndiye ndagxila ekuziseni nzulu ixabiso kubaphulaphuli bam. Ndiqhubekile ndenza iividiyo ezininzi, ndizimisela njengengcali yomcimbi wentengiso, ishishini, ulawulo kunye neshishini. Ngokuthumela ngokungaguquguqukiyo kunye nokunxibelelana rhoqo, ndikhulise abaphulaphuli bam kakhulu kwezi nyanga zimbalwa zizayo: ngoku ifikelele kubalandeli abangama-70,000!
Isicwangciso sam sevidiyo pivot (kunye nokuzimisela kwam ukufumana ubuqu) kuhlawulwa ngendlela yeetoni zesikhokelo esitsha. Ngokuzibeka phaya kwaye ndithethe ngobomi bam, abantu bayandazi, bafikelele ukuba bacinga ukuba bakulungele ukusebenza nathi, kwaye inkqubo yentengiso ihambisa umbane ngokukhawuleza. Ngeli xesha la mathuba e-LinkedIn aqala ukutyelela iwebhusayithi yenkampani yam okanye ukufikelela kum, babesele beziindlela ezishushu. Ukuza kuthi ga ngoku, inkampani yam ityikitye ngaphezulu kwesigidi seedola kwizivumelwano ezivela kwizikhokelo ezivela kwi-LinkedIn.
Ngelixa ndinoncedo oluvela kwiqela elimnandi elikhuthaza ezo zikhokelo, isizukulwane esikhokelayo linyathelo lokuqala elikhulu-kwaye lifuna iqhinga levidiyo ye-LinkedIn eyomeleleyo.
Ukuxelela ibali eliBonakalayo
Iividiyo ze-LinkedIn yindlela entle yokuxelela amabali anyanzelisayo, abonwayo malunga negama lakho kunye neshishini lakho. Ngelixa zombini ezi fomathi zilungile, uhlala uhambisa kakhulu malunga negama lakho kwividiyo kunokuba unakho kwiposti yebhlog.
Ixabiso levidiyo lilele kwizinto okwaziyo ukuzidlulisa ngokubonakalayo / ngokuvakalayo. Umboniso bhanya-bhanya uvumela abantu ukuba banxibelelane nawe kwaye bade bazi ngenxa yokuba banokufumana ulwazi kulwimi lwakho nakwindlela othetha ngayo. Abantu abaninzi bandixelele ukuba baziva ngathi bayandazi ngokujonga iividiyo endabelana ngazo kwi-LinkedIn.
Umyalezo ofanayo unokufunyanwa ngokwahlukileyo xa usiva ithoni kunye nemvakalelo yesithethi. Imithombo yeendaba kwezentlalo sisiseko sokuthumela imiyalezo ebhaliweyo, kodwa ividiyo iziva inyanisekile. Umboniso bhanya-bhanya uphinde ubonakalise "ukuqaqambisa reel" ukuba imithombo yeendaba zentlalo ibe. Kuya kufuneka ube krwada kancinci, uyinyani yokwabelana ngevidiyo — isifundo endisifunde rhoqo kulo nyaka uphelileyo ngelixa sasifota iividiyo nabantwana abathathu befunda ekhaya ngasemva.
Ukuhlakulela abaphulaphuli bakho abaLungileyo
Ezona ndlela zibalaseleyo zokuziphatha esizenzayo kwezinye iindlela zokuthengisa ziyasebenza apha, nazo; Oko kukuthi, kufuneka ube nesicwangciso malunga nabaphulaphuli bakho, kwaye kufuneka unike abantu isizathu sokukhathalela.
Kangangokuba sithanda ukucinga ukuba ukuphosa umnatha obanzi kuya kuvelisa ngakumbi izikhokelo, siyazi ukuba ayiyonyani leyo. Kuya kufuneka uzimisele ngabaphulaphuli bakho xa usenza ividiyo ye-LinkedIn. Uthetha nabani? Ngelixa uhlala usalathisa umxholo obhaliweyo kumntu othile, ukuba nabaphulaphuli abathile engqondweni ojongana nabo ngelixa ufota kuya kukunceda wenze umxholo onamandla ngakumbi.
Nje ukuba ugqibe ukuba uthetha nabani, ufuna umyalezo oza kuvakala kwakhona. Uyazi ukuba yintoni ngokuqinisekileyo engayi kuvakala? Inkcazo yemveliso okanye inkonzo yakho. Kuya kufuneka unike abantu a isizathu sokukhathalela malunga nenkampani yakho ngaphambi kokuba uthethe ngayo. Gxila ekwenzeni umxholo ofundisayo ngaphandle kokukhankanya inkampani yakho.
Ngaphambi kokuba uqale ukufota, zibuze:
Yintoni abakhathaleleyo abaphulaphuli bam?
Yintoni abaphulaphuli bam enexhala ngayo?
Yintoni abaphulaphuli bam abafuna ukuyifunda malunga ne-LinkedIn?
Khumbula: ukuhlakulela abaphulaphuli akupheli xa ucofe 'uPosti.' Kuya kufuneka kwakhona wakhe abaphulaphuli bakho ngasemva ngokunxibelelana (kunye nokuthatha umdla wokwenene) kwintengiso ekujolise kuyo.
Ukuqinisekisa ukuba abaphulaphuli ekujoliswe kubo obonileyo bayayibona ividiyo yakho, kuyanceda ukunxibelelana kuqala. Iqela lam kwaye senza oku ngokwenza uluhlu lwethemba kwishishini ngalinye kwaye ndibamema ukuba bajoyine iinethiwekhi zethu ukuze babone umxholo wethu kukutya kwabo. Bahlala bekhunjuzwa ngophawu lwethu kunye nexabiso lethu ngaphandle kokuba sithengise ngokugqithiseleyo.
Ukudala isicwangciso sakho seVidiyo esiDibeneyo
Ukulungele ukuqala ukwenza ividiyo yakho ye-LinkedIn ukwakha uphawu lwakho kunye nenkampani? Sukuyibila — kulula kuyo qalisa kunokuba ucinga.
Nazi ezinye zeengcebiso endizifundileyo malunga nokwenza ividiyo esebenzayo ye-LinkedIn kule minyaka-2 idlulileyo- kubandakanya iinyanga ezili-10 zokuphuhlisa ividiyo ngexesha lobhubhane:
Sukuyicinga. Vula nje ikhamera kwaye udubule. Andizibukeli neevidiyo zam kuba ndiza kuzikhetha.
Yabelana ngezithuba kusasa. Uya kubona ukubandakanyeka okungakumbi kusasa kunangokuhlwa.
Yongeza imibhalo engezantsi. Abantu banokubukela kwifowuni okanye kufutshane nabanye, kwaye banokufunda kunokumamela. Kukwindlela yokusebenza efikelelekayo.
Yongeza isihloko. Ngelixa usongeza izihlokwana, yongeza umxholo ekubambeni ividiyo yakho
Yiba ngumntu. Izithuba zam ezenze kakuhle ngokwenene bezimalunga nokusilela, zibonisa inkqubela phambili nokusingatha iimeko ezinzima.
Yiba ngowokuqala. Ndizamile ukuthumela uluhlu lwevidiyo kodwa ndinento entsha endinokuyithetha (enezihloko ezahlukeneyo kunye nezithonjana) yeyona nto ibalulekileyo.
Yongeza ngekopi. Abantu abanakho ukubukela ividiyo yakho epheleleyo, kwaye kulungile! Banike isizathu sokuhlala kwisithuba sakho kwaye bazibandakanye ngokongeza ikopi enyanzelekileyo.
Ukukhulisa uphawu lweB2B kwaye uhlale ukhuphisana, kufuneka usebenzise ividiyo ye-LinkedIn. Vala amehlo akho kwaye ungene! Nje ukuba uqale ukuthumela, awuyi kukholelwa ukuba khange ulayishe kwakamsinya.
Landela uJackie Hermes kwi-LinkedIn
tags: b2bIvidiyo ye-b2bIsicwangciso sevidiyo se-b2bUJackie hermesLinkedInAbalandeli abadibeneyoukuthengisa okuhlanganisiweyoividiyo edibeneyoinaniukuthengisa ividiyoUkubalisa ibali
UJackie Hermes yi-CEO ye Ukwaneliseka, Iarhente esekwe eMilwaukee enceda ukuqala kwesoftware-njengenkonzo (i-SaaS) yokufumana ingeniso kwaye ikhule ngokukhawuleza, kunye nomsunguli wentsebenziswano IVeki yoShishino lwaBasetyhini. Isebenza kakhulu kwi LinkedIn, UJackie uvusa iingxoxo malunga nobomi bemihla ngemihla kunye nemiceli mngeni yokukhula kwenkampani evulekileyo. UJackie ucebisa ukuqala kwabafundi ngokudlula I-CommonsUmququzeleli we Ukuqalisa iMilwaukee EMERGE, kunye nomcebisi nge Abatyalomali beengelosi zegolide. Ukongeza ekuzibandakanyeni kwakhe emsebenzini, uJackie ngumama owamkelekileyo kunye nomqhubi wenqwelomoya ozayo.